शक्ति प्रदर्शन गर्न नखोजौ अनुसन्धान भईरहेको छ रवि त के दोषी जो भयपनी हामी छोर्दैनौ एसपि मल्ल , – Ranga Darpan
शक्ति प्रदर्शन गर्न नखोजौ अनुसन्धान भईरहेको छ रवि त के दोषी जो भयपनी हामी छोर्दैनौ एसपि मल्ल ,
रङ्ग दर्पण सम्वाददाता	 प्रकाशित मिति: Aug 16, 2019
साउन ३१ , काठमान्डौ – पत्रकार शालिकराम पुडाशैनिको आत्महत्या अभियोगमा पक्राउ परेका अर्का पत्रकार रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरि ५ दिनको लागि हिरासतमा राखेको छ ।
चितवन प्रहरीले रवि लामिछाने सहित अन्य दुईजना युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीलाई पनि पक्राउ गरि कारबाही अनुसन्धान अगाडी बढाएको छ। चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी दाङ बहादुर मल्लले भने ।
हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौ , रवि लामिछाने त के दुरुत्शान गर्ने जोकिहीलाई हामि छोडदैनौ ।पुडाशैनिको घटनामा संलग्न प्रमाण संकलन गरिरहेका छौ ।
,पोस्ट्मापन रिपोर्ट र ल्याब टेस्टको रिपोर्ट आज साँझ सम्म आउछ ।दोषी भय हामि कसैलाई छोड्दैनौ उनले भने।
चितवन प्रहरी कार्यालयमा आज रवि लामिछानेका समर्थकले नारा बाजी र ढुंगा मुढा गरेका छन् ,। यो सम्बन्धि एसपि मल्ले भने ,मान्छेको मृतु भयको छ ।रविका कारण मृतु भयको भन्ने भिडियो बाहिरिएको छ।
हामीले अनुसन्धान गर्न नमिल्ने के हामि रविको अफिसमा पुगेर सोधपुछ गरौ ।दोषी ठहर नभय उँहा जानु हुन्छ हैन भने आजै किन दोषी होइन भन्दै नारा लगाउन पर्यो जे गर्छ कानुनले गर्छ।
संगै काम गर्ने पत्रकार मरेको छ ।तेसैमा रविले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाए भन्ने भिडियो सार्वजनिक भयको छ ।दोषी अरु कोहिपनि हुन सक्छ ,तर अनुसन्धाननै नगरी बिना सर्त रिहा गर भन्न नाला लगाउने ।तेसो हो भने पुडाशैनिको हत्यारा को हो त खोज्नै नमिल्ने मल्लले रंग दर्पण संग भने ।
किन शक्ति प्रदर्शन गर्न पर्यो ? हामि अहिले कुनै कुरा बोलेका छैनौ ।रिपोर्ट हेर्छौ , रवि समर्थक भन्दै गृहमन्त्री थापा वादललाई आतंककारी भनेर नारा लगाईएको छ त्यो के हो ? नाराबाजी सहित ढुंगा मुढा गर्दा ५ जना प्रहरी घाईते भएका छन् ।
यो कुरा उनीहरुले बुझ्न पर्छ पुडासैनीले साउन २० गते चितवनमा आत्महत्या गरेका थिए । आत्महत्याको बेला पुडासैनीको मोबाईलमा भिडियो फेला परेको छ ।भिडियोमा आफुले आत्महत्या गर्नुको कारण रवि लामिछाने भयको पुडाशैनिले खुलाएका छन् ।
गोर्खा ताकोकोटको गाईजात्रामा बल्छी धुर्बे र धिरजको नाच हेर्नुहोस ,,
पुडाशैनिले न्याय पाउनैपर्छ चितवनमा उर्लियो अर्को आन्दोलन ,,